Ny kintana Hollywood sy ny sary hosodoko mahazatra dia natambatra tamin'ity andiany ity | Famoronana an-tserasera
ny tarehimarika sarimihetsika Hollwood mamiratra izay nahatonga anay hanana fotoana mahafinaritra sy mahaliana toa an'i Marilyn Monroe ao Zipo fotsy ary adala, na Clint Eastwood tenany ao Vola mitentina dolara avy amin'i Sergio Leone. Fotoana fijerena sinema Hollywood izay ao anaty fitadidiantsika ary misy mpanakanto milalao mampifangaro azy ireo amin'ny kilasika hafa.
Ireto kilasika ireto dia sangan'asa hosodoko izay azontsika tadidy amin'ny fotoana iray ihany rehefa mandalo eo alohan'i Mona Lisa, Frida na sary mitovy amin'ny an'i Van Gogh. Luigi Tarini dia mpanakanto italiana monina any Krakow. Rehefa avy nalaza ho an'ny andian-dahatsoratra "Obama sy Merkel ho mpilalao sarimihetsika" sy "Icon Horror in Lighthearted", dia nanaitra antsika indray i Luigi tamin'ny sary an-tsaina. andian-tantara mashup nahazo tsindrimandry Sary hosodoko malaza sy malaza any Hollywood.
Tsotra be ilay hevitra, satria hoy izy amin'ny tapa-tarehy roa miaraka ary mampiray azy ireo ho iray. Nanomboka ity andiany ity, araka ny namaritan'ilay mpanakanto azy, rehefa natambany tamin'ny endrik'i Van Gogh ny endrik'i Clint Eastwood. Noho izy tsy faly tamin'ny valiny dia namorona mashup roa-sisiny izy.
Notazominy foana ny mason'i Clint Eastwood orona Van Gogh mampiavaka sy ny fomba kanto fantany. Ny valiny dia mendrika hoderaina araka ny ahitanao ny sary lohateny izay ahitantsika fa mampitolagaga sy mahazendana miaraka ihany ny fusion. Toa izy ireo raha natambatra tanteraka tamin'ny sombin-javatra tena miavaka.
Anisan'izany ny fanangonana collage an'i Mona Lista miaraka amin'i Marylin Monroe ary ny valiny nahagaga an'i Clark Gable sy Vivien Leigh tao amin'ilay malaza lasa Miaraka amin'ny Rivotra. Azo vidiana ny sanganasany avy eto.
Misimisy kokoa momba an'i Hollywood sy ny kantony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Kintana Hollywood mahazatra sy sary hosodoko malaza mifangaro amin'ity andiana Mashup ity